Sei Train ndeimwe zvikuru Modes Of Transportation | Save A Train
musha > Travel Europe > Sei Train ndeimwe zvikuru Modes Of Transportation
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 11/12/2020)
The polemic pamusoro kurovedza maringe bhazi mu Europe munhu haana-kupedza nyaya, wose ane pfungwa dzavo pamusoro. asi, isu kunyange kutaura vakachengeteka, uye kana tiri - kwakakwana? Safety kwedu chokufambisa vakasarudzwa vanofanira kuuya pakutanga, and we’re addressing it today. kazhinji, vanhu vanowanzofunga kutaura nyaya iyi zvakasiyana, zvichienderana yavo hwokufambira zvaunofarira. Uyezve, nhau zvatinonzwa pamusoro tsaona munyika chinhu, naizvo. Paunenge uchaita kashoma kunzwa paiva chitima kwendege kumwe, zvinoitika. Sezvahunongoita pamwe mhepo, motokari, bhazi uye nedzimwe nzira yokufambisa. kunyange zvakadaro, Nhamba dziri pachena - pamutemo, chitima ndeimwe zvikuru modes chokufambisa mazuva ano! Chete pamwero vakachengeteka anoenda mhepo motokari apo dzimwe nzira dzose pakufamba kuuya pashure.
Chitima ndechimwe cheMhando Dzakachengeteka dzeKufambisa muNyika Dzese?
Aihwa, hazvisi. Havasi njanji zvose uye zvitima zviri zvakafanana yepamusoro. Patinotaura pamusoro njanji pakufamba chengetedzo, isu kazhinji nezvazvo mumaratidzirwo zvimwe nyika. nyanya, njanji kufamba yakachengeteka chaizvo, asi zvakadaro haruitiri vachiongorora mamiriro nyika njanji uye connectivity kana uchida kufamba nechitima.
Semuyenzaniso, manomwe chete makore akapfuura U.S. kuverengwa 32,367 mugwagwa fatalities, 570 njanji fatalities, uye 485 mhepo fatalities. Ava chete mafungu nhamba, asi vanoita kupenda rakanaka pachena mufananidzo kuratidza kuti nechitima pakufamba uye nendege zvose yekudyidzana ngozi pane mugwagwa pakufamba.
Kana uri parwendo kumativi Europe, tarisa izvi zvinoshamisa chitima maidi.
Chii Vane Least Wakachengeteka Achishandisa Transportation?
Kuti vanofanira kuva mudhudhudhu. Jokingly (kwete kuti pane shamisa ikoko) vanachiremba nomuitiro kureva midhudhudhu (i.e., kuti tsaona anokonzerwa akatasva mumwe) sezvo “Anenge apa wacho anoderedzerwa zvinogara.” zvinenge, Tsaona idzi kazhinji saka kakawanda uye dzinouraya kuti zvibereko zvizhinji nhego vaipa. Kuenda mu vamwe uchitsanya nezvitima mu Europe haakonzeri tsaona dzakawanda.
Ndingaitei Kuti Train Is Rimwe zvikuru Modes pakati Transportation Now?
Hezvino zvimwe pamusoro nei chitima ndechimwe zvikuru modes chokufambisa:
Kana zvose railroads nezvitima tinonyatsokwanisa vatora kutarisirwa (i.e., aigara Serviced, akaramba, akatsiviwa kana zvichidiwa, etc.), iwe unenge kashoma nokusingaperi vapupurire chero tsaona iyi kunoreva chokufambisa. Chimwe chikonzero ndechokuti, kusiyana mugwagwa kutakura, pane nzira chete uye imwe kufamba nzira (i.e., chitima) vachitevera mumwe nzira ayo kwavaiendeswa. No Motokari zvisingatarisirwi vari kuuya nzira yenyu, kuita iwe kuzvidzora pamusoro vhiri. Hapana kamwe inochinja uye majana, uye nezvimwe kunetseka nengozi ezvinhu. Izvi zvinogona kuva chimwe chikonzero nei chokufambisa nechitima akaramba mumwe zvikuru modes chokufambisa saka kure.
The Train ndeimwe zvikuru Modes Of Transportation pamwe Environmental Benefits
Kana tikaenzanisa njanji chete mugwagwa uye mhepo zvifambiso, isu taizoratidzira zviri nyore kuti Chitima ndeimwe yeiyo Akachengeteka Maitiro Ekufambisa asiwo zvimwe zvakawanda inogona kuenderera kupfuura chero imwe nzira yekufambisa. sei? Zvitima regai kubereka mazhinji CO2 choutsi, uye chitima choutsi zvisina kusunungurwa zvakananga muimba muchadenga. Plus, nezvitima murege kupedzana simba rakawandisa kana nzvimbo, uye avo ruzha mumatunhu vari vashoma pane dzimwe chokufambisa nzira. Vazhinji vanoziva eco vafambi vanosarudza zvitima zvevapfuuri senzira yavo yekufambisa yesarudzo. Vafambi akapoteredza Europe, wo, vanoda eco ushamwari nezvitima pamwe kwavo vakachengeteka nemishumo.
Kunze abovementioned zvezvakatipoteredza zvikomborero kuti vari, panguva imwe, utano pachedu makomborero edu, kwete chete Train ndiye Mumwe Of The zvikuru Modes Of Transportation asi vakatasva nezvitima vari yakanaka kunopindirana utano hwedu.
Pamusoro Republic nezvitima, vanobvumira avo makatasva navo:
Kufamba famba pengoro uye famba mukoridho ari chitima apo kufamba. Izvi zvinobatsira muviri mutsigiri Mobile
Famba pasi pamabasa avo kana misha mushure kusiya chiteshi. Izvi kukuru nomuviri wavo
Tora kumborara munzira yekuenda kubasa nekudzoka kubva kubasa usina njodzi yekupinda mu tsaona yemotokari. An chinokosha dziviriro chengetedzo
Nakidzwa zviitiko zvekuzorora pakati pemapoinzi A neB. A naka nzira dzokuzorora uye vawane pachako kubva kwindi
mazuva ano, apo munhu wose ari zvakapfuuridza nokuuruka yavo motokari chigaro dzavo cheya pabasa ndiEzekieri, ndine zvimwe hwava kuderera nguva pakati kunokosha. Kuva mukana kuzorora muchitima sezvo iwe kuenda vachidzoka zvechokwadi ndeimwe zvikonzero zvakawanda nei vanhu vanosarudza nezvitima.
Achitaura-refu daro nezvitima, vari tarenda nezvechisarudzo kufamba sezvo vanobvumira vamwe downtime. Kuwana semaonero A anogumira B mu 2 Maawa nendege anoshanda, asi zviri ngozi utano hwako? Zvine dambudziko redu Blog romukova “Train ndiye Mumwe Of The zvikuru Modes Of Transportation”? Unogona kwako muviri uye pfungwa dzinoona zvachinja okunze, kumanikidzwa mumhepo, uye zvose zviri pakati? sanyanya. Ndokusaka kufamba kudzidzisa kumativi Europe anopa muviri wako mukana vajaire shanduko uye dzinoona navo utano nzira.
mukwende (chengetedzo) Benefits
Kwete chaizvo mumwe utano kana vakachengeteka kubatsira, asi mukwende kuchengeteka chinoita rakanaka rinokosha vamwe vanhu. Zvisinei kana iwe rongedza chiedza yokufamba kana kwete, uchida mikwende wako chimwe chidimbu. Vafambi Vazhinji vateresi zvinokosha zvinoratidza, zvidhori, zvinyorwa, nezvimwewo. uye vanoda kuyeuka zvavo. Zvinosuruvarisa, nendege inozivikanwa inozivikanwa yakarasika uye yakakuvadzwa mukwende izvo zvisingawanzo kuitika kana iwe uchifamba nechitima. Plus, mikwende wako nguva dzose newe, saka hapana anogona machira panguva mukwende murandu. Uyu chikonzero kutaura chitima ndechimwe zvikuru modes chokufambisa? Tinofunga saka.
Dzidzisai kufamba haisi mukombe wose yetii, asi zvechokwadi mumwe zvikuru mikombe, uye kunyanya fadza vane, wo. nguva Next muri urongwa yenyu zororo rwendo, funga kuti Train ndeimwe yeiyo Akachengeteka maModhi Ekufambisa, uye usazeza kupa chitima kufamba mukana. Hazvina garika, hazvina, zviri nakisa fadza, uye chiitiko zvauchasangana kurangarira nokusingaperi. Kana uri kufamba famba Europe, kutirovera runhare pa https://www.saveatrain.com kuti bhuku tikiti yako maminitsi asingasviki matatu uye kutanga kunakidzwa ngozi pakufamba kwenyu pamusoro njanji!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-safest-transportation%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#Fashoni nyoro ravel #ngozi #safetravel #kutakura